२२ वर्षका युवकका तीनवटी श्रीमती, तीनैवटी मिलेर खोज्दैछन् चौथी सौता ! – yuwa Awaj
काठमाडौं : सौता भन्ने शब्द महिलाहरुलाई पटक्कै मन नपर्ने शब्द हो । महिलाहरु विवा’हपछि घरमा धेरै दुःख सहेर बसेका उदाहरणहरु छन् । महिलाहरु निकै सहनशील हुन्छन् तर वि’वाहित महिलाले सहनै नसक्ने कुरा हो – सौता ।
उनीहरु अरु धेरै कुरा सहन सक्छन् तर आफ्नो श्रीमानलाई अरु कसैसँग बाँड्न पटक्कै तयार हुँदैनन् । तर एक २२ वर्षका युवकका तीन श्रीमतीहरुले भने चौथी सौ’ ताको खोजी गरिरहेका छन् ।गल्फ टुडेका अनुसार अदनान नामका यी पाकिस्तानी युवकले २२ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा तीन बिहे गरिसकेका छन् ।
र, अब उनका तीन श्रीमतीहरु मिलेर चौथी सौता खोज्दैछन् । उनका तीनैवटी श्रमिती उनीसँगै छन् । पाकिस्तानको सियालकोटका अदनानको चर्चा अहिले विदेशसम्म पुगेको छ । मुस्लिम समुदायमा १ भन्दा धेरै विवाह गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन तर श्रीमतीले नै आफ्नी सौता खोज्नु भने निश्चय पनि अनौठो कुरा हो । अदनानले पहिलो बिहे १६ वर्षको उमेरमा गरेका थिए ।
शुबानाको एउटा बच्चालाई कान्छी शाहिदाले आफ्नो मानेकी छिन् ।अदनानका तीन श्रीमतीहरुले उनीमाथि सबै श्रीमतीहरुलाई पूरा समय दिन नसकेको आरोप भने लगाउँछन् तर तीनैवटीले अदनान र बच्चाहरुको ख्याल गछृन् । अदनान तीनैजना श्रीमतीलाई प्रेम गर्छन् । उनको घरको एक महिनाको खर्च डेढ लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ हुन्छ ।
Prevगृहमन्‍त्री र आईजीपीलाई थाहै नहुनेगरी कसरी थपियो एआईजीको दरबन्दी ?
Nextचीनबाट रक्षामन्त्री र भारतबाट विदेश सचिव नेपाल आउने…हेर्नुहोस् ।